မစ္စ Pacman Galaga Pac က Man 60 Classic 80's Arcade Game - Prize ကိုအရောင်းစက်များ | Arcade ရေး Simulator | ရွေးနှုတ်အားကစားပြိုင်ပွဲ | ကလေးများ Arcade အားကစားပြိုင်ပွဲ | ဂန္ထဝင် Arcade စက်များ | Mini ကိုပန်းခြံစီးနင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » မစ္စ Pacman Galaga Pac က Man 60 ဂန္ထဝင် 80 ရဲ့ Arcade ဂိမ်း
ဂန္ထဝင် Arcade ဂိမ်းစက်သည် 80 ရဲ့ဂိမ်းများစွာပါဝင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောမစ္စ Pacman အဖြစ်, ဂလာဂါ, Pac Man, etd, ၎င်းသည်အခမဲ့ကစားနိုင်သည့်စနစ်နှင့်အကြွေစေ့ဖြင့်ကစားသည့်မုဒ်ကိုထောက်ပံ့သည်, ၎င်း၏အိမ်မှာပျော်စရာနှင့်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သော, ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံသဏ္smallာန်အနည်းငယ်ကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်. Win-Win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်!
ပုံစံ ဂန္ထဝင် Arcade ဂိမ်း
အချက် ဖြောင့်မတ်ဂန္ထဝင် Arcade ဂိမ်း – LF03
ဂိမ်းအရွယ်အစား W65 * D55 * H170cm
စွမ်းရည်2ကစားသမားများ
အားကစားပြိုင်ပွဲ 60 ဂိမ်းများတွင်ပါဝင်သည်
စောငျ့ရှောကျ 19"LCD ကို
Play Mode အကြွေစေ့သို့မဟုတ်အခမဲ့ဂိမ်း mode ကို
စွမ်းအား 100V-220V, 100W က
အရောင်ရွေးချယ်မှု ရုပ်ပုံအဖြစ်, စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်!
MOQ 1 အစုံ
အထုပ် 20'' ကွန်တိန်နာ: 27 PCS
40'' ကွန်တိန်နာ: 56 PCS
မစ္စ Pacman Galaga Pac Man အတွက်ထူးခြားချက်များ 60 ဂန္ထဝင် 80 ရဲ့ Arcade ဂိမ်း
2, 60 ဂိမ်းများ, 412 ဂိမ်းများတွင် Pac Man ကဲ့သို့သောဂိမ်းအသစ်များနှင့်ဂန္ထဝင်ဂိမ်းများပါဝင်သည်, ဂလာဂါ, Space Invaders, မြည်းဟောင်ကောင်, မင်းက, နှင့်အများကြီးပို
3, 19"နှင့် 22" optional ကိုဖြစ်ကြသည်!
5, Chrome ကို T - မှိုကိုချုံ့
9, Illuminated သို့မဟုတ် plain color Joysticks နှင့်ခလုတ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်!
1, ဝင်လာသောပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း: ကျနော်တို့အဝင်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပေါ်တင်းကျပ်စစ်ဆေးခံရသည့်စနစ်ရှိ.
2, အပြောင်းအလဲနဲ့စစ်ဆေးခြင်း: ကျနော်တို့အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်စက်စစျဆေးဆိုတာတွေ့ရဖို့ QC များ.
3, ကိုလက်စသတ်ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးရေး: ချောထုတ်လုပ်မှုအပြီး, အားလုံးစက်ထုပ်ပိုးမတိုင်မီကျပန်းအတွက်ကစားခံရဖို့လိုအပ်.
4, ထုပ်ပိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်း.
FCL(အပြည့်အဝကွန်တိန်နာ) – ရေမြှုပ် + ရုပ်ရှင်ကျုံ့ + စံပို့ကုန်မြှောင်းပုံကိစ္စတွင်
LCL အစုလိုက် – ရေမြှုပ် + ရုပ်ရှင်ကျုံ့ + စံပို့ကုန်သစ်သားဘောင် / သစ်သားသေတ္တာ
60 တွင် 1 Arcade ဂိမ်းစာရင်း
ရှိပါတယ် 48 ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ထူးခြားတဲ့ဂိမ်းများနှင့် 12 အပေါ်ဂိမ်းများ၏ 60 တွင် 1 ဂိမ်းဘုတ်အစာရှောင်ခြင်းရိုက်ချက်ဗားရှင်းဖြစ်ကြသည်, စုစုပေါင်းပေးခြင်း 60 ဂန္ retro Arcade ဂိမ်း.
1 မစ္စ Pac-Man 21 ဂလာဂါ 41 Frogger
2 မြည်းဟောင်ကောင် 22 မြည်းအငယ်တန်း 42 မြည်းဟောင်ကောင် 3
3 Galaxian 23 မင်းက 43 ကြိတ်စက်ကြိတ်စက်
4 မစ္စတာ. လုပ်ပါ 24 Space Invaders 44 Pac Man
5 ဂလာဂါ325 Gyruss 45 တင့်တပ်ရင်း
6 1942 26 Lady Bug 46 ဘာဂါအချိန်
7 ဟုတ်တယ် 27 ဆံပင် 47 နှစ်ထပ်ကိန်း
8 JR Pacman 28 ကွာဟချက် 48 ဖီးနစ်
9 အချိန်ရှေ့ပြေး 29 စူပါမြွေ 49 Hustler
10 အာကာသထိတ်လန့်ခြင်း 30 စူပါ breakout 50 နယူးချီတက်ပွဲ X
11 Arkanoid 31 Qix 51 Juno ပထမ
12 မင်္ဂလာပါ 32 မစ္စတာ. Castle လား 52 မွန်း Cresta
13 Pinball လှုပ်ရှားမှု 33 ကြက်သွန်ဖြူ 53 စူပါ Pacman
14 ဗုံးဂျက် 34 Shao-Lin လမ်းမ 54 ဘုရင် & ပူဖောင်း
15 1943 35 ဗန်ဗန်ကား 55 Pacman Plus အား
16 မင်းက236 Amidar 56 Zaxxon
17 တောင်ငူ 37 မင်္ဂလာပါ 57 သေနတ်မီးခိုး
18 ပြီးပါပြီ 38 1943 ခိုင် 58 ကွန်ဂို Bongo
19 ဂျက်ခုန် 39 မစ္စ Pac-Man(2) 59 မင်္ဂလာဆောင်(2)
20 Pac Man(2) 40 Jr.. Pac Man (2) 60 Pacman Plus အား(2)
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဂန္ထဝင် Arcade ဂိမ်းစက်များ
1, tabletop Arcade စက်များ
2, ကော့တေး Arcade စက်များ
3, မတ်လ / ဒေါင်လိုက် Arcade စက်
4, ကော်ဖီစားပွဲတင် Arcade စက်များ
5, Pinball စက်
6, Dart စက်များ
8, Air ဟော်ကီစားပွဲဝိုင်း
1, ဂန္ထဝင်ကစားနည်းများကိုနှစ်သက်သောသူသို့မဟုတ်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်မျှဝေလိုသူတိုင်း.
2, The Bar / အရက်ဆိုင် / ကော်ဖီဆိုင် / ကလပ်များ / Karaoke Bar / စားသောက်ဆိုင်များ.
3, Shopping Mall / စူပါမားကတ်
4, Arcade ဂိမ်းခန်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ဖီစားပွဲ Arcade ဂိမ်း၏သင့်တော်သောနေရာ
1, ဘား / အရက်ဆိုင် / ကော်ဖီဆိုင် / ကလပ်များ / Karaoke Bar / စားသောက်ဆိုင်များ
2, Shopping Mall / စူပါမားကတ်
3, Arcade ဂိမ်းခန်း
ငွေပေးချေမှုအခြေအနေ 30% ကြိုတင်ငွေသွင်း, 70% စစ်ဆေးခြင်းပြီးနောက်ဒါပေမယ့်ပေးပို့မီ
အာမခံချက် 1 တစ်နှစ်အာမခံ,တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
Bartop Arcade စက် 60 အားကစားပြိုင်ပွဲ
Retro Mini Tabletop Arcade ဂိမ်းစက်
Mini 80′ tabletop Arcade စက်
Mini Classic Tabletop Arcade စက်
Tabletop Street Fighter Arcade
2 ကစားသမားကော့တေး Arcade ဂိမ်း